Ajaja walii gala kan waa’ee baqattotaa fi biyyoota lammiwwan isaanii akka Amerikaa hin senne dhorkamanii kan ilaaleen prezidaant Traamp ajaja haaraa har’a mallatteessanii jiru.
Lammiwwan biyyoota 6 jechuun Iraan, Libiyaa, Yaman, Somaaliyaa Sudaan fi Siriyaa baatii sadiif akkasumas baqattonni hundumtuu baatii afuriif akka Amerikaa hin seenne lafa ka’amee jira. Iraaq tarree maqaa biyyoota uggurri imalaa irra ka’amee ture keessaa baafamtee jirti.
Uggurri kun Baatii keessa jirru Bitooteessa 16 bara 2017 kaasee hojii irra kan oolu yoo ta’u kanneen ehama jireenyaa yunaaytid Istees “Griin Kaard” jedhamu qaban kan hin ilaallanne ta’uun beekame jira.
Kana malees namoota hanga Amajjii 27 bara 2017 tti vizaa qaban ajajii kun hin ilaallatu.Gama kaaniin Baqattonni Siriyaa amantii irratti hundaa’uun guutuummaatti akka Amerikaa hin seenne kan jedhamee turees keessaa baafamee jira.
Traamp dhuma baatii Amajjii darbe ajaja wal fakkaataa mallatteessan manni murtii iyyata dhaggeeffatu kan Federaalaa erga kuffisee booda isa kana har’a mallatteessan.